Global Voices teny Malagasy » Azerbaijan: Tafaverina ny tranonkala malaza — tsy nasiana forum · Global Voices teny Malagasy » Print
Azerbaijan: Tafaverina ny tranonkala malaza — tsy nasiana forum
Voadika ny 10 Oktobra 2018 12:57 GMT 1	 · Mpanoratra Simon Maghakyan Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Azerbaijan, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Febroary 2009)
Taorian'ny andro maromaro nikatonana,  tafaverina ny tranonkala Azerbaijani tsy miankina malaza momba ny adihevitra sy vaovao, Day.az. Na izany aza, mitohy ny fanontaniana tamin'ny nanjavonany vetivety, tsy toy izany kosa ny forum ao amin'ny tranonkala- fantatra amin'ny adihevitra misokatra sy demokratika.
Ampitson'ny nanakatonana ny Day.az, nilaza ny maha zava-dehibe ny forum  ilay mpisera Zaur ao amin'ny bilaogy Web Designers.
Azo inoana fa nisy ifandraisany tamin'ny fitsapankevi-bahoaka tamin'ny 18 Martsa [izay hametraka fiadidiana tsy voafetra ao Azerbaijan] ny fanakatonana: tena fifanojoana tokoa fa [nakatona ny day.az] iray volana katroka talohan'ny [fitsapa-kevi-bahoaka]. Manakana loharanom-baovao ahafahan'ny olom-pirenena maneho ny tsy fifaliany momba ny fitsapa-kevi-bahoaka […].
Manoratra ao amin'ny Amnesty International USA Blog talohan'ny nanokafana indray ny Day.az tamin'ny 26 Febroary, nanamarika fihetsika sasany mampiady hevitra tao amin'ny forum ihany koa aho:
Iiray amin'ireo vavahadin-tserasera malaza indrindra ao amin'ny Firaisana Sovietika manontolo teo aloha, nanana mpiserasera an'arivony mavitrika ny seha-pifaneraserana miteny Rosiana ao amin'ny Day.az. Iray amin'ireo fizarana mafapàna indrindra tao amin'ny seha-pifanakalozana ny “Armenia sy Azerbaijan.”
Tamin'ny novambra 2004, araka ny notaterin'ilay mpisera tao amin'ny forum Armeniana amin'ny teny Rosiana tamin'izany fotoana izany, nanome alalana ho an'ny mpandrindrany voalohany Armeniana, Arthur, ny fitantanana tao amin'ny Day.az mba hamafa/hanova izay votoaty manafintohina sy/na tsy misy ifandraisany amin'ny adihevitra.
Mbola tsy nisy toy izany ny fanendrena, araka ny fanazavan'ny fanambarana amin'ny teny Rosiana avy amin'ny mpitantana ny forum Day.az […]
Hetsika iray hafa mampiady hevitra, vao haingana tao amin'ny forum ny famoronana sehatra manokana izay ahafahan'ny mpiserasera manana lahatsoratra maherin'ny 500 miresaka sy mamoaka votoaty hoan'olon-dehibe.
Manoloana ireo hafatra isan-karazany navela tao amin'ny pejy fandraisan'ny tranonkala taorian'ny fanjavonany, maro amin'ny zavatra hita no mifanohitra tamin'ny nambara teo aloha milaza fa nakatona ny tetikasa manontolo, mbola sahiran-tsaina  ireo mpamaky tahaka an'i Arzu ao amin'ny Flying Carpets and Broken Pipelines.
- Raha misy ny drafitra hivarotra ny vavahadin-tserasera tany am-boalohany, nahoana no tsy nohazavaina na nambara tamin'ny fanakatonana voalohany ny tranonkala sy talohan'ny nanakatonana azy? Mbola afaka nanohy niasa ny mpandrindra raha niova ny fitantanana?
– Nahoana no notazonina tao anaty haizina sy tao amin'ny tranonkala izany rehetra izany, nolazaina fa nakatona izy noho ny antony ara-teknika? Misy lafiny ara-teknika ve ny fanovana fitantanana ny tranonkala?
Tsy fantatro ireo valiny fa angamba tsy ho ela dia hazava izany?
Amin'izao fotoana izao, raha maro no matoky fa tsy hitovy amin'ny taloha intsony ny tranonkala rehefa nambara fa hipoitra indray ny tranonkala, Ali S. Novruzov ato amin'ny Global Voices naneho hevitra tao amin'ny lahatsorany voalohany Frontline Club fa ny tsy fisian'ny forum no fiovana miavaka indrindra .
Niverina nisokatra androany ny Day.az, saingy nisaraka taminy ny forum malaza tao aminy ary niova ho 600min.az,, tranonkala hafa an'ny day-az teo aloha. […]
Saingy raha manontany tena ny sasany fa mety ho ny forum no anton'ny fanakatonana ny Day.az, mbola tsy voavaly kosa ny maro tamin'ireo fanontaniana mikasika ny fanjavonany voalohany .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/10/127077/
 andro maromaro nikatonana,: https://globalvoicesonline.org/2009/02/21/azerbaijan-news-site-closed-down/
 nilaza ny maha zava-dehibe ny forum: http://web.pdesigner.net/2009/02/19/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD/
 nanamarika fihetsika sasany mampiady hevitra tao amin'ny forum : http://blog.amnestyusa.org/europe/azerbaijan-popular-website-%e2%80%9ctemporarily%e2%80%9d-closed/
 mbola sahiran-tsaina: http://flyingcarpetsandbrokenpipelines.blogspot.com/2009/02/dayaz-is-back.html
 fiovana miavaka indrindra: http://frontlineclub.com/blogs/alisnovruzov/2009/02/leading-azeri-online-news-portal-shuts-down.html